Kutheni uMartech esiQhinga sokuQiniseka kokuKhula kweShishini | Martech Zone
Itekhnoloji yokuthengisa ibinyukile kule minyaka ilishumi idlulileyo, singasathethi ke ngeminyaka. Ukuba awukamamkeli uMartech okwangoku, kwaye usebenza kwintengiso (okanye kwintengiso, ngaloo nto), ke kungcono ungene ebhodini ngaphambi kokuba ushiye ngasemva! Itekhnoloji entsha yokuthengisa inike amashishini amathuba okwakha amaphulo okuthengisa anempembelelo kwaye anokulinganiswa, ahlalutye idatha yokuthengisa ngexesha lokwenyani, kunye nokuzenzekelayo kwintengiso ukuqhuba uguquko, imveliso kunye ne-ROI up, ngelixa unciphisa iindleko, ixesha kunye nokungasebenzi. Yiloo nto esiza kuthetha ngayo ngakumbi kweli nqaku-indlela itekhnoloji yentengiso eyinceda ngayo imveliso ukuba ikhule, ngelixa ivelisa ixabiso elibonakalayo leshishini.
Ukuthengisa oku-Agile kuthetha ukuba yi-ROI engcono
Uninzi lwamasebe okuthengisa alumkile bachitha imali yabo kwintengiso kuba abacingi ukuba banokuxela ngqo ukuba ngubani oza kubona ezo ntengiso. Oku kuyinyani kwihlabathi lakudala lentengiso, kodwa, kwihlabathi lanamhlanje, lonke olu lwazi lusezandleni zesebe lezentengiso.
Ngobuchwephesha bokuthengisa, umthengisi, ishishini elikhulu okanye umnini wenkampani uyakwazi ukujonga ngokuchanekileyo ukusebenza kwephulo lokwazisa kwaye ujonge ukuba ngubani obona le ntengiso, kwaye luhlobo luni lwempembelelo enayo ngoku kwaye eya kuqhubeka unayo. Ezi zinto zinokubanjiswa kangangoko kunokwenzeka ukuze abathengi abaninzi beze emnyango.
Ngamanye amagama, iMartech yenza ukuphucuka okuqhubekayo ukuqhuba ukugcwala okujolise ngakumbi, ukuvelisa ngakumbi izikhokelo, kunye nokunika ingxelo i-ROI kwishishini ngendlela ebonakalayo. UDan Purvis, uMlawuli kwi I-Comms Axis
Iinkampani zinamathuba amaninzi okuphucula kunye nokuphuhlisa izicwangciso zazo ngokuchanekileyo ngokwenza ukuba ukubikezela kwedatha kube lula. I-ROI yile nto yonke intshukumo yentengiso eyilelweyo ukufezekisa. Ufuna ukuphuma ngaphezulu kunokubeke, kunye nedatha eninzi yokuhlalutya kunye nokusebenzisa ukukhomba amandla kunye nobuthathaka, izicwangciso zakho zinokuchaneka ngakumbi kwaye zinokufezekiseka kunangaphambili.
Ukuthengisa kungene ixesha elihle lotshintsho oluqinisekileyo, kwaye kungokuphuhliswa kwetekhnoloji entsha kunye neenkqubo ezinokuthi zenzeke.
UMartech ubeka uMthengi wakho phambili
Ukuthengisa kuhlala kuxhomekeke kwidatha yabathengi kunye nokuqonda. Kodwa, njengoko idatha ifumaneka, iinkqubo kunye neendlela zokusebenzisa kunye nokuhlalutya le datha ziye zangaphezulu.
Umzi mveliso ube nepivot enkulu ekubeni unedatha eninzi kwaye ungaqondi ngokwenyani ukuba kuthetha ntoni okanye ungabanceda njani, ukubanakho ukulandelela konke ngexesha lokwenyani kunye nokufumana ulwazi olubalulekileyo nolusebenzayo kulo.
Kananjalo, indima yomthengisi (kunye naliphi na isebe lentengiso) iguqukile ngaphaya kokuyila. Ibe sisinyanzelo sesicwangciso-buchule sokukhula kweshishini ngokongeza umaleko wenzululwazi kunye nobungqongqo kuhlalutyo lomkhankaso. Akukho ndawo yokufihla, kodwa kuyo yonke indawo ukukhula.
Ukunyuka kweMisebenzi yokuThengisa
Imisebenzi yokuthengisa iye yavela njengendawo enomdla ebisoloko iqokelela amandla ngenxa yefuthe elithe ngqo elinalo kwishishini 'lokuqhuba i-ROI ebonakalayo nenokulinganiswa. Ilungelelanisa isicwangciso sakho kunye neenkqubo, kokubini kwitekhnoloji kwaye ngokuhambelana nemisebenzi yeshishini ngaphandle kwesebe lentengiso. Ukusebenza ngokufanelekileyo kwentengiso ngundoqo ekudibaniseni lonke ishishini kunye nokufezekisa iinjongo zakho eziphambili.
Ukuqhekeka kwesebe eliphakathi kuhlala kuthethwa ngalo, kodwa iisilo zangaphakathi kwisebe zihlala zihoywa. Umzekelo, kwisebe lakho lentengiso, kunokubakho ukwahlukana okungakumbi kunye nokungavisisani. Imisebenzi eyahlukeneyo yentengiso inokusebenza yodwa kungekho nxibelwano lubanzi kwisicwangciso; idatha inokungaphathwa kakuhle, ifakwe ngokungachanekanga ngenxa yempazamo yomntu, okanye igcinwe ngeendlela ezahlukeneyo nakwiindawo ezahlukeneyo. Ukudunga i uqhagamshelwano Ikwadlala indima ebalulekileyo ekugcineni isebe elihlangeneyo lihlangene.
Namhlanje, ukuthengisa kunikwe amandla yitekhnoloji. Nokuba awuyiboni ishishini lakho njengokuqhutywa kwetekhnoloji, unokuqiniseka ukuba inentengiso yetekhnoloji esebenza. Nokuba sesona siseko sisisiseko nesaziwayo kwezicelo ezinje ngeGoogle Analytics,Hootsuite okanye Imeyilechimp, okanye isoftware yobuchwephesha ngakumbi kwi-niche yakho.
Itekhnoloji inokuba luncedo ekuqinisekiseni ukuba ezi nkqubo zahluliweyo zidityanisiwe. Iinjongo kwisebe lakho lentengiso zinokwahluka kodwa ngoku zinokubekwa embindini, zilungelelaniswe kwaye zilungelelaniswe. Ngaphezulu kweenkampani ezingama-4,000 ngoku utyalo-mali kwitekhnoloji yentengiso, kwaye lishishini elikhulayo, nelingaxhamla kuwo onke amashishini.
Uninzi lweengcali zentengiso zizithatha "njengezinto eziyilayo". Kwaye ngesizathu esivakalayo, nanjengoko kuyinto ebalulekileyo yendima yabo kwaye enye inyuse intengiso ngaphaya “kokumnandipha” ngokubanzi, ukuba nefuthe elibonakalayo kwishishini. Nangona kunjalo, ngaphandle koku, khange ikwazi ukusoloko ibonwa njengesixhobo esifunekayo yiBhodi kunye neC-Suite.
Nangona kunjalo, njengoko ubuchwephesha bobuchwephesha kunye neDatha eNkulu iqhubeka ukumisa indlela yokwenziwa kwamaphulo entengiso, lixesha lokwamkela ukuthengisa sisayensi. Iqhutywa yitekhnoloji, kodwa isabandakanya ukuqonda kokuyila kweqela lakho, ukuthengisa kuye kwaba bubugcisa besayensi obunokulinganiswa, bulandelelwe kwaye babekwe esweni ngokusondeleyo, ukuqinisekisa ezona ziphumo zibalaseleyo.
I-80% yeenkampani ngoku une-teknoloji yokuthengisa eyintloko okanye elinganayo ngokwe-2015-16 Gartner CMO Spend Survey. Oku kuxhasa ngakumbi inqaku lokuba itekhnoloji yentengiso ilapha ukuze ihlale kwaye iya ngaphaya kokuxhasa ukongeza kumxube wentengiso. Njengoko ikwenza ukuqhuba kwentengiso, ukuphuculwa kokusebenza kakuhle, kunye nokuveliswa kwe-ROI yeshishini elibonakalayo, ukuthengisa ngoku kuyakwazi ukubekwa njengonobuchule obucebisa ngokuthe ngqo ukukhula kwalo naliphi na ishishini.
Ngamaphulo ajolise ngqo, ukuvelisa okukhokelayo kunye nentengiso kufuneka yonyuswe ukuhambisa i-ROI ephezulu. Oku kufuneka, ke ngoko, kukuvumele ukuba uhlangane nolindelo lwentengiso ojolise kuyo, njengoko unedatha yokuqinisekisa ukuba uyazi ukuba bafuna ntoni.
IMartech ayisiyonto intsha, nangona kunjalo, kwaye xa idityaniswa nemisebenzi yentengiso inokuhambisa uhambo lwakho lwabathengi kwaye ikhawulezise ukukhula kweshishini lakho kulwaziso lwebrand ukuya kukhokelela kuhlobo nasekuthengiseni. Unokuqiniseka ukuba abo bakhuphisana nabo kwi-niche yakho bakha izitokhwe zabo zentengiso, ukuba sele bengazisebenzisi, ke kuya kufuneka wenze okufanayo.
Ukukhetha ukungahoyi izibonelelo ezinokuthi zize netekhnoloji yokuthengisa ishishini lakho kukukhetha ngokuzimisela ukuzibeka kwisithintelo kwabo ukhuphisana nabo. Indawo yokuthengisa kunye nentengiso yanamhlanje itshintshile ngendlela entle kakhulu ngenxa yetekhnoloji; Ishishini lakho kufuneka liqiniseke ukuba liyatshintsha nalo.
Ukuba ungathanda ukubona indlela iMartech enokukunceda ngayo ukukhulisa ishishini lakho, nceda uncede ujonge I-Comms Axisiinkonzo - asizithandi iincoko ezinganyanzelekanga!
tags: Ukukhula kweshishiniuqhagamshelwanoukukhulaurhweboUhlalutyo lwentengisoidatha yentengisoimisebenzi yentengisoItekhnoloji yentengisoUtyalomali lobuchwephesha kwezentengisoIsicwangciso setekhnoloji yokuthengisamartechutyalo mali lweMartechIsicwangciso seMartech
Isicwangciso esinezinyathelo ezi-5 zokuLungiselela ukuKhangela kwakho kubathengi.